Allgedo.com » 2011 » February » 08
Home » Archive Daily February 8th, 2011 Press Release: Press Statement of the Somali TNG Council of Ministers Feb 8, 2011 The Transitional Federal Government Council of Ministers has met today for an extraordinary meeting at its headquarters. The meeting was chaired by the Prime Minister Mr. Mohamed Abdullahi Mohamed and discussed the way forward and the challenges presented by the ending mandate of the Transitional Federal Institutions on August 20, 2011.
The council of Ministers also discussed the Transitional federal... Waxgarad kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa baaq kasoo saaray abaaraha ba’an ee ku dhuftay gobola Gedo (akhri baaqa oo dhan) Feb 8, 2011 Oslo, Norway (AOL) – Anaga oo ah waxgarad kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa waxaan ugu baaqaynaa jaaliyadaha dibada ee kasoo jeeda gobalka Gedo in ay u istaagaan u gargaarida dadka iyo duunyada ay abaaruhu naafeeyeen.
Dhulkii waxaa ka taagan abaar aad iyo aad u xoog badan oo dad iyo duunyaba marisay. Dadka ay abaartu naafeysay ee ay dhibaatada weyn soo gaartay waa dadka reer guuraaga ah,... Ra’isal Wasaare Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday maamul goboleedka Galmudug Feb 8, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefdigii ka socday maamulka Galmudug kaasoo uu horkacayay madaxweyne Maxamed Axmed Caalin.
Xubnahan ayaa kulan qado ah la qaatay Ra’iisul Wasaaraha waxaana gabo gabadii kulankooda saxaafada la hadlay Ra’iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha... Wafdi ka socda Puntland oo Booqasho ku tegay Buuhoodle. Feb 8, 2011 Wafadi ka socda maamulka Puntland ayaa gaaray degmada Buuhoodle oo ay ka taagan yihiin xiisada u dhexeeya maleeshiyaad deegaanka ah iyo kuwa taabacsan maamulka isku magacaabay Somaliland.
Wararka ka imaanaya Buuhoodle ayaa xaqiijinaya in maanta ay magaalada soo gaareen wafdi ka tirsan Puntland, balse ahaa sacabooley aan hubaysneyn taasi oo dadka magaalada u fasirteen in Puntland aysan diyaar... Baaq Nabadeed ku socdo kooxaha ku dagaalamayo waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Kalshaale iyo nawaaxigiisa Feb 8, 2011 Gudoomiyaha ururka SORASOD Eng. Idiris Hassan Farah waxuu ugu baaqayaa kooxaha ay dirirtu u dhaxayso inay joojiyaan dagaalka si looga baaqsado dhiig sii daato.
Waxaan ka dalbanaynaa kooxahaan ku dagaalamayo Kalshaale inay si sharuud la’aan ah u joojiyaan dagaalada ka holcaayo Kalshaale isla markaana la isugu yimaado miiska wada hadalka.
Sidaa darteed, waxaan maamulada iyo hogaamiyayaasha hogaaminayo... Gudoomiyihii hore ee Maxkamada darajada 1-aad ee Magaalada Gaalkacyo oo xalay lagu toogtay Magaaladaasi. Feb 8, 2011 Kooxo hubysan oo aan haybtooda la garan ayaa xalay ku toogasho ku dilay gudoomiyihii hore ee Maxkamada darajada 1-aad ee magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dilka Gudoomiyha maxkamadda darajada 1-aad ee magaalada Gaalkacyo ay geysteen dhalinyaro bistoolado ku hubeysan kuwaasi oo falka dilka ah kadib baxsaday.
Marxuumka geeriyooday ayaa la oran jiray Sheekh... Xukuumadda KMG ah oo walaac ka muujisay go’aankii baarlamanka. Feb 8, 2011 Iyadoo beesha caalamka ay cadaadis xoogan saarayso dowladda KMG ah kadib markii dhawaan waqti dheeri ah loo kordhiyay baarlamanka ayay dowladda KMG ah isku dayaysaa in ay qaboojiso xaaladda.
Shir ay golaha wasiirada ku yeesheen Muqdisho ayay ku sheegeen in ay ka xun yihiin go’aanka baarlamanka waxayna soo saareen warsaxaafadeed raali gelinaya beesha caalamka.
Aqriso Warsaxaafadeed ka soo baxay... Mid kamida wadooyinka Kismaayo oo dayactir lagu sameeyay. Feb 8, 2011 Maamulka Islaamiga magaalada Kismaayo ayaa soo gaba gabeeyay dayactirka wadada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay ku burburtay dagaaladii sokeeyay ee ka dhacay Kismaayo.
Waxaa la dhamaystiray dhisme socday muddo 11 maalmood ah oo ay ka qeyb qaadanayeen shirkadaha ganacsiga,gaadiidleyda Kismaayo iyo maamulka Islaamiga ee magaaladaasi kajira.
Wadadan oo dhererkeedu gaarayay 650 Mitir ayaa laga dareemayay... Dagaalkii Kalshaale oo hakaday iyo hubanti la’aan ka taagan cidda ku sugan deegaanka. Feb 8, 2011 Xaalad deganaanshiyo ah ayaa lagasoo sheegayaa deegaanka Kaalshaal ee duleedka degmada Buuhoodle oo ay shalay ka dhaceen dagaallo culus oo gaystay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Wararka nagasoo gaaraya Buuhoodle waxay xaqiijinayaan in Kaalshaal ay tahay mid degan mana jiraan wax dagaallo ah oo ka dhacay marka laga reebo saameynta dagaalkii shalay oo weli ka taagan deegaanka.
Dhinacyadii shalay dagaalamay... Radio Allgedo/ Waraysiyo